China steel steel304and316 Whipcheck badbaadada dharbaaxayaasha saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Linhui Hardware
Dharbaaxada badbaadada karbaashku waa badbaado togan - waardiyeeya isku xirka tuubada. Xadhkaha birta ah ee xoogga leh waxay ka hortagaan tuubada tuubada haddii ay dhacdo kala go'a isku-xidhka ama qalabka isku-xidhka si lama filaan ah. Wuxuu gaaraa dhammaan qalabka tuubada si uu u bixiyo badbaadada tuubada. Silsilooyinka guga ku raran fiilada ayaa si fudud u furma si ay uga gudbaan isku xirayaasha si ay si adag ugu qabsadaan tuubada, sida muuqata. Waxa si fiican loogu tijaabiyay sanado adeeg.
Waxaa loo qaabeeyey inay ka hortagaan dhaawacyada ama shilalka ka dhasha tuubada ama isku xidhka oo xumaada. Jeegaga karbaashka ayaa ku fidaya qalabka tuubada si ay u ilaaliso badbaadada tuubada. Kaliya dib u soo celi guga oo simbiriirixan siddooyinka tuubbo kasta ka hor inta aanad xidhin si aad uga ilaaliso tuubada tuubada.
Tuubadayada waxa loo qaabeeyey oo la abuuray iyada oo maskaxda lagu hayo macaamiisheena, taas oo awood u siinaysa ka hortagga shilalka halkaas oo khadka tuubada uu kala qaybin karo si aan ula kac ahayn oo uu keeno tuubada tuubada.
Tilmaamaha & Faa'iidooyinka
Ilaalinta wax ku oolka ah si looga hortago tuubada tuubada
Ku habboon in loo isticmaalo isku xirka tuubada-tubbada iyo tuubada rakibaadda kombaresarada
Laga soo saaray dabacsanaan, galvanized, silig badan
karbaash 1/4" * 38" Birta kaarboonka galvanized 6 970 350 18 2.0 1 1/2 "- 3" 2200
1/4 "* 38", waxaa laga soo saaray 6mm xadhig bir galvanized galvanized xadhig silig ilaa culays badbaado leh oo 2 tan ah.
Hore: karbaash hubi fiilada badbaadada leh baadiyaha naxaasta ah
Xiga: Tuubbada Qalabka Waxay hubisaa badbaadada tuubada hawada
Cadaadiska sare ee Cable Chokers
Loop Cable Lock karbaash hubi fiilada badbaadada
Xadhkaha Qufulka Badbaadada
fiilada badbaadada birta ee tuubada saliidda
Xadhigyada Amniga Xadhigyada